ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အမှတ်စုများနှင့်စာသား - ကလေးသည်အိပ်ပျော်နေတဲ့ Sleeping
Sleeping ကလေးကအိပ် - မှတ်စုနှင့်စာသား
သားသမီးရဲ့သီချင်းစာရင်းစစ်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်နှင့်သက်သေပြအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များဂီတကိုချစ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထံမှပိုငျးတှငျအဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုရလဒ်များသည်။ ဂီတမှတဆင့်ကလေးများရိုးရှင်းစွာပိုကောင်းကြွင်းသောအရာမှလာသောကျန်းမာအိပ်ပျော်ခြင်းပြပွဲအပေါ် ပို. ပင်လေ့လာမှုများ။
မိဘများမှာလည်းသူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုမှလက်လှမ်းအိပ်ပျော်ဖို့သားသမီးရဲ့သီခငျြးမြားစှာအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုလုပ်ရန်မကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ရမည်။ ဒါပေမယ့်အစေးမှန်ကြောင်းကိုအနည်းဆုံးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်, သင်မှတ်စုများနှင့်သားသမီးရဲ့သီချင်းကစာသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးဒီဇိုင်း template ကို print ထုတ်လိုပေလိမ့်မည်။ ပိုကြီးတဲ့ KIinder မှတ်စုများနှင့်စာသားတွေနဲ့လည်း prima သူ့ဟာသူအရွက်စိတ်ကူးနိုငျပါသညျ!
image ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, အရောင် pdf format နဲ့မှတ်စုများနှင့်စာသားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်
အိပ်စက်ခြင်း, ကလေး, အိပ်ပျော်ခြင်း!
မိုဃ်းကောင်းကင်၌, သိုးသရေကျ ':
ဒီကသင်၏ဂိမ်း journeyman ရလိမ့်မည်။
နှင့် Blok '' မသိုးကဲ့သို့:
ကောင်းသောညဥ့်မင်္ဂလာညနေခင်း - မှတ်စုနှင့်စာသား
သငျသညျကြယ်များဖြစ်ကြသည်မည်မျှသိလား - မှတ်စုနှင့်စာသား
ငါကြွင်းပင်ပန်းသွားရမိပါတယ် - မှတ်စုနှင့်စာသား
မှတ်စုနှင့်စာသား - အခုတော့အပေါငျးတို့သသစ်တောများငြိမ်ဝပ်စွာနေ
Hänschenသေးငယ်တဲ့ - မှတ်စုနှင့်စာသား
သင်ငန်းခိုးယူ Fuchs - မှတ်စုနှင့်စာသား